News - Ntụ ọka Mill Plansifter Machine / Plansifter Maka Osikapa egweri Mills
Ntụ ọka Mill Plansifter Machine / Plansifter Maka Rice egweri Mills
Usoro FSFG na-etinye aka n'ọtụtụ ebe a na-egwe ọka ntụ ọka na osikapa na-egwe ọka. Dị iche iche sieving imewe na-eje ozi maka dị iche iche sifting amaokwu na dị iche iche n'etiti ihe.
- FSFG usoro Plansifter na-ebugharị site na moto nke arụnyere n'ime isi ihe ma na-edozi nke ọma site na mpempe akwụkwọ. Igwe ọ bụla nwere akụkụ 4, 6, ma ọ bụ 8 dị sieve n'ime. Ihe dị iche iche na-abanye n'akụkụ dị iche iche n'okporo ụzọ ha. Dika imara onye obula maka ihe di iche, ndi ozo na-aghapu ihe di iche iche di iche iche na uzo di iche iche na igwe nri mgbe igwe dum na agba.
- Sieve frame size: 640x640mm, 740mmx740mm, ma ọ bụ mee dị ka ndị ahịa 'pụrụ iche chọrọ.
- Enwe ígwè efere kpuchie. Ejiri igwe anaghị agba nchara mgbidi dị n'ime. Kemeghi counterweight ndokwasa na SKF (Swedn) pụrụ iche abụọ n'usoro ala biarin na onwe kwado ụdị.
- Sieve okpokolo agba na-mere site imported osisi ntekwasa n'ime na n'èzí na plastic melamine lamination, demountable, kennyeghari. Sieve okpokolo agba eji eji igwe anaghị agba nchara. A na-ejikọ akụkụ nke ọ bụla site na osisi ọla na nrụgide micrometric mgbali site n'elu. Ọ dị mfe na ngwa ngwa ịgbanwe sifting atụmatụ.
- Ngalaba maka ihapu nke Planifter, gụnyere nwa plastic okpu n'ime ike ndọda spouting akporo.
- Sieve ihe iji bụrụ ntupu.
- A na - enwetakwa sieve ndị ọhụụ Nova, sieve nke dị n'ime ala maka idebe ihe ọcha.
Plansifter myọ eji na ọka nhazi osisi
- A na-etinye ya n'ọrụ na igwe ọka ntụ ọka nke oge a, ụlọ ọrụ nhazi ọka na osikapa egwe ọka.
- A na-ejikarị ya eme ihe maka ọka wit na-egweri ọka na ihe si n'etiti ihe ntanetị, nwekwara ike iji ya maka ntụ ọka.
- Dị iche iche sieving imewe na-eje ozi dị iche iche sifting amaokwu na dị iche iche n'etiti ihe.